igqoka Curvy babe izakhi emangalisayo imfashini ikhabethe zabesifazane phakathi yekhulu nesishiyagalolunye. Namuhla zokubhukuda ezinjalo owesifazane ezama ngempela ezingavamile. Ngokwesibonelo, umshado noma Prom. Nokho, uma ukuthola isembatho ezinjalo kuba disadvantageous kakhulu. Noma kunjalo, ngifuna ukubheka omkhulu. Kukhona isixazululo! Skirt yegridi kakhulu nje eyenziwe ngezandla zabo. Ukuba khona inqubo ethile akudingi amakhono.
Skirt yegridi - evelele esithombeni
Isembatho ngempela engavamile kakhulu futhi original. Naphezu kwakho konke lokhu, umphetho wengubo yegridi isihloko enemisebenzi ngempela zokugqoka yilowo nalowo wesifazane. Kunengqondo, kungani kudingeka? Khona-ke, ukuze sisize ehlukahlukene esithombeni. Gqoka isiketi-anezikhala kungaba noma kuphi - ngosuku, ukugubha, epikinikini ngisho ehhovisi uma kungekho ingubo imithetho eqinile. Kulesi imodeli, le ntokazi uyohlale kubonakale kwabanye besifazane, Airy romantic - ngakho lokho futhi kufanele zikhombise wobulili bubuhle. Uma une indodakazi, ungakwazi niyilungise kule izingubo eyingqayizivele, ukudala isithombe inkosazana kweqiniso.
Thunga izandla zabo
Tutu-isiketi, wenza ngokwakho, thatha yabajabulisa ngokukhethekile. Kumnandi ngakho ukugqoka izinto bathunga yezandla zabo. Net, yebo, okokusebenza ngempela "Moody". Nokho, puzzle obukhethekile zakroykami futhi kuthatha isikhathi lokuthunga awudingi. Ukuze sibhekane nale umsebenzi can yimuphi owesifazane, ngisho noma umsebenzi wakhe kule ndawo kuphela kwaba phezu kwesifundo pillowcase ezomnotho.
Ngokuvamile, uma ufuna baye baphendukela elihle isiketi tutu, kuqala ukunquma ngemibala. Lokhu into uzobe 'abonwe' futhi original uqobo. Ngakho-ke overdo ukugqama ikakhulukazi alikufanele. Kungcono ukuba makudle-graphite, ikhofi, grey, amathoni abamhlophe nabansundu. Kulokhu, ungakwazi uzigqoka kunanyana ngibuphi ubujamo okibo. On ikhabethe yezingane lo mthetho, yebo, asisebenzi.
Ngaphambi kokuthi uqale thunga umphetho kugridi, cabangisisa kahle ngokuthi ibhizinisi lakhe futhi ulungiselela ukubulawa lobuchwepheshe yenqubo. Cabanga into eqeda esizayo. Mhlawumbe kuzoba isiketi multi-ungqimba noma esifushane ukuhlanganisa leggings. Kufanele wenzeni uma ufuna ukuba isiketi eside ukuba phansi?
Nquma ukuthi zinjalo yini kuzoba ezinombala ofanayo noma emibalabala. Yini ufuna ukufeza ubukhazikhazi? Kungakhathaliseki ukuthi iphakethe abavamile, noma isiketi nge ulwelwesi? It uhlala luhlaka indaba emfushane okwe ukuzilungiselela umsebenzi phambili.
Sekuyisikhathi ukuyothenga. isiketi Fluffy yegridi kufanele wenziwe okusezingeni eliphezulu impahla izinga. Ububanzi yesimanje inikeza ikhasimende ligunya lekukhetsa kabanti ngokwanele. izinto ezahlukene akuzona imibala kuphela, kodwa futhi nobulukhuni, kuye ngokuthi ububanzi we amaseli anezikhala uqobo. Kungaba esobala futhi isisindo, aminyene futhi matte. Ungakwazi ukuthenga inetha acwazimulayo kancane. Kuzoba ukucwazimula limnandi ekukhanyeni. Ungakhohlwa ukuthi uma uthenga mncane anezikhala impahla uzoba udinga ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, kuyodingeka gum ebuhleni nasebubini. Owokuqala uyoba isebangeni okhalweni, ekubeni okuthiwa usekelo isakhiwo sonke. Kunalokho, wesibili ingasetshenziswa spandex. Yiqiniso, isidingo imitha umthungi umbusi, iphepha, izikhonkwane, insipho, lisuswe, ipensela, intambo, sikelo, kufunwe iphepha kanye umshini wokuthunga.
I lobuchwepheshe ingxenye
Ngakho, ungaqala ukusebenza. Ukuze uqale, qinisekisa izilinganiso ezimbili - selilonke okhalweni ubude elilinganisiwe umkhiqizo. Ake sithi udinga isiketi-ilanga kusukela kugridi "Okuningi". Ukuze ayethunga nalo obuphelele kukalwa kusukela okhalweni kwamadolo, enezele futhi omunye ngamasentimitha amahlanu. Okhalweni selilonke ehlukaniswa 3.14. Lesi sibalo okuholela iyanda yi ezimbili. Ukunakwa kufanele ikhokhwe futhi sezinsini. Kufanele kube ngempela obukhulu futhi uhlale kahle okhalweni ngaphandle ukusonteka futhi ngaphandle elengela inqubo amasokisi. Ngokwesibonelo, uma uhlala phansi. Kahle ububanzi ngamasentimitha amahlanu.
Manje siqala amaphethini yokukhiqiza. Ephepheni sokulandela ukudweba umkhumbi double. Eyokuqala ilingane engaba okhalweni, kwesibili - ubude umkhiqizo. Isifanekiso ufuna ukusika nge sikelo. Ngemva kwalokho, kugridi ibonakala kabili, njengoba incwadi, bese futhi. It uphendulela izingqimba eziyisishiyagalombili material. Kwamanetha ivaliwe ngasesinqeni se inhlangano esebenzisa izikhonkwane. Sika workpiece. It kuvela imibuthano abane izimbobo phakathi. Basuke ungeze ngababili. Khona-ke tack maphakathi emaphethelweni emgodini. Izikhala kukhona superposed ku nomunye futhi fixed izikhonkwane ezindaweni ezine (okhalweni). Amacebiso yaleli thumba gum futhi ezedlulayo babehlanganisa.
Indaba ukulungele iqinile ohlangothini elingaphakathi, futhi Ithungelwe ngendlela amazombe. isiketi engezansi tulle ithungwe. Into esemqoka ukuthi siqine. Unqenqema engenhla isingathwa basting Stitch, intambo is some ngokwanele ukumboza Friend ehlezi okhalweni. Ingxenye engezansi inqanyulwa ukuze kusukela ngaphansi Emphethweni walo lalingabonakali ngamehlo. Uma uya ukugqoka isiketi phezu leggings futhi tights, ungenza ngaphandle ikhava.
onobuhle eside ithungwe ngendlela efanayo. Nokho, kumelwe siqaphele kakhulu nge ubude uphawu. Phakathi nokunwetshiwe bafake iziketi kungalimala. Ngoba ukunaka Kunconywa ukunikeza obuphelele ngokulinganisela. Umphetho akufanele udonse babambelele izithende. Ideal - umkhiqizo efinyelela emaqakaleni.
Ngakho, wobuciko yakho isilungile. It uhlala kuphela ukuhlobisa izesekeli isiketi ngendlela esilindele yakho. Ungasebenzisa satin kuze kudabuke umhlane, imigexo ethile noma ubuhlalu. Ungenza isiketi ngisho nangokwengeziwe, Barks amagugu wakhe ngendlela kunezinxushunxushu. Ngomqondo onabile, ungasebenzisa noma yini oyifunayo. Umphetho kugridi sokuba namantombazane njalo, isibonelo, Lingase ehlotshiswe izimpaphe zokuhlobisa. Udinga nje kuphela ukuba baveze nemicabango yabo muhle futhi imfashini njalo.
Cuffs - Iyini?
Nezingubo isitayela Chicago
Yokwelapha Photodynamic in Oncology: emihle nemibi
Kanjani ukusuka Domodedovo ukuze Sheremetyevo. Yikuphi engingakhetha kukho?